Ntụgharị asụsụ Bekee Bekee kacha mma - IntegritySyndicate.com
Mbido Ntọala Akwụkwọ Nsọ Ntụgharị asụsụ Bekee Bekee kacha mma
Ntụgharị asụsụ Bekee kacha mma
Ihe kpatara o ji dị mkpa…
Ezi nke ntụgharị asụsụ Bekee
Gịnị Ka Izi ezi Pụtara?
E Gosikwara Mmebi Iwu na Nsụgharị Bible
Nsụgharị kacha mma nke Testament Ọhụrụ
Ntụgharị asụsụ kacha eji ebe niile
Nke kacha mma abụghị n'okpuru mmachibido nwebiisinka
Nhọrọ ndị ọzọ nwere ọnụ ụzọ ziri ezi> 80%
King James Version (KJV) bụ nrụrụ aka
Amaokwu kachasị mma
Ntụgharị asụsụ agba ochie site na asụsụ ndị ọzọ
Melite izi ezi nke nghọta site na iji ihe agbakwunyere
Saịtị a na-akọwapụta ntụgharị asụsụ Bekee kacha mma n'ihe gbasara izi ezi na ịgụ ya. A na-elebakwa anya isiokwu dị ka mkparị na ntụgharị asụsụ na mkpebi ndetu. N'ikpeazụ a na-enye akụrụngwa ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ masịrị nke gụnyere webụsaịtị, ngwa na akụrụngwa ngwanrọ dị elu.
Bible bụ ntọala okwukwe Ndị Kraịst
Ọ bụ ebe anyị si ghọta eziokwu nke ihe anyị kwesịrị ikwere na otu anyị kwesịrị isi bie ndụ
Anyị achọghị ịdị na -ehie ụzọ ma ọ bụ na -eme ihe ụgha
Ndụ anyị na olileanya anyị n'ime Oziọma na -adabere na ya
N'okpuru bụ eserese nke ntụgharị Bekee na -agbada n'ụzọ ziri ezi, n'ihe gbasara Critical Text (NA27) site n'aka ekpe gaa n'aka nri. Enwetara data a sitere na Comprehensive New Testament, © Cornerstone Publications, 2008.
Mbipụta Dị Mkpa nke Agba Ọhụrụ bụ ederede n'asụsụ Koine Greek mbụ nke Agba Ọhụrụ dabere na nkatọ ederede na mmụta mmụta ọgbara ọhụrụ.
A maara ederede dị mkpa dị ka Novum Testamentum Graece, njikọ Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Novum_Testamentum_Graece
Enwere nsụgharị abụọ yiri Nestle-Aland, Ugbu a 28th Edition (NA28) na United Bible Societies, Ugbua 5th mbipụta (UBS5)
Ihe odide a bụ ntọala nke ọtụtụ nsụgharị Bible ọgbara ọhụrụ
Agbanyeghị, ntụgharị Bible nke oge a na -esi n'ihe odide dị oke mkpa pụọ ​​n'otu ọkwa ma ọ bụ ọzọ
Ha na -ahọrọ iji ụdị dị iche iche nke ederede dị mkpa dabere na ntụle gụnyere itinyekwu mma na nkà mmụta okpukpe "Ọtọdọks" yana idobe ọdịnala ederede ederede.
A na-atụ nke ọma site n'otú ntụgharị si agbanwe agbanwe na mbipụta dị mkpa.
Eziokwu ziri ezi, dị ka atụpụtara n'elu, metụtara nhọrọ n'etiti ederede dị iche iche ahọpụtara ka a sụgharịa kama ka ntụgharị si dị.
Usoro maka ịgbakọ izi ezi dịka COM ji mee ihe bụ ndị a:
Tụgharịa asụsụ ọdịiche ederede na ihe odide ochie na Bekee
Tụlee ederede nke dị na ntụgharị asụsụ ọ bụla na ihe dị iche iche wee chọpụta nke kacha dị nso na ntụgharị asụsụ.
Kewaa ọnụ ọgụgụ oge a na -esepụta ntụgharị asụsụ nke ọ bụla n'ụdị dị iche (na ntụnye aka na ederede NA27) site na ngụkọta nke amaokwu nwere ihe dị iche, wee wepụta nsonaazụ ya na 100%.
Ịgụ ihe bụkwa ihe dị mkpa ịtụle. Ọ bụ ịdị mfe nke onye na -agụ nwere ike ịghọta ederede ederede. N'asụsụ ebumpụta ụwa, ịgụpụta ederede na -adabere na ọdịnaya ya (mgbagwoju anya nke okwu na nhazi ya). Enwetara data maka ịgụ ihe sitere na Comprehensive New Testament (COM) © Cornerstone Publications 2008 nke jiri ụdị Readability Studio 1.2.0.0 © 2007 gbakọọ ọkwa ọgụgụ nke COM ma e jiri ya tụnyere ntụgharị iri abụọ n'ọmụmụ ntụnyere ha gbakọrọ dị ka Coleman-Liau si kwuo. usoro akara. Egosiri ọtụtụ ntụgharị asụsụ n'okpuru na -ebelata ịgụgharị site n'aka ekpe gaa n'aka nri.
Nsụgharị Bekee niile na -egosi ihe ụfọdụ. Ndị a bụ ụzọ esi ewebata ele mmadụ anya n'ihu na ntụgharị asụsụ:
Ezighi ezi na ederede isi mmalite (iji ụdị dị iche iche)
Nha nhata ederede (dochie ederede)
Ọ bụghị ịsụgharị okwu n'ụzọ nkịtị
Ịha nhatanha - ịhapụ nraranye siri ike na nhazi ụtọasụsụ nke ederede izizi iji kwado ntụgharị asụsụ ka mma n'asụsụ ebumnuche.
Asịrị na ntụgharị okwu na nkebi ahịrịokwu
Eisegesis - Usoro nke ịkọwa ederede n'ụzọ ga -ewebata echiche nke onwe ya, agendas, ma ọ bụ enweghị mmasị - nke a na -akpọkarị ịgụ n'ime ederede.
Isiokwu ngalaba na -atụ aro na -eduga onye na -agụ ya n'ime nkwenye ụfọdụ
Isi okwu, akara edemede, na nhọrọ nchịkọta akụkọ ndị ọzọ gụnyere Akwụkwọ Nsọ mkpụrụedemede
Nkọwa ala, nkọwa na ntụnyere ntụaka
Comprehensive Agba Ọhụrụ (COM)
Nkwupụta Nkume (2008)
Njikọ Amazon: https://amzn.to/38PDy6Q
Comprehensive New Testament (COM) na-anọchite anya nhọrọ ederede nke Critical Greek Text (mbipụta Nestle-Aland 27) n'ụdị Bekee a ga-agụli. Emepụtara Agba Ọhụrụ a ọkachasị maka ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ yana ọ kacha bụrụ nke ziri ezi ma e jiri ya tụnyere ihe odide Grik dị oke mkpa. A sụgharịrị ihe karịrị ọdịiche 15,000 dị n'ihe odide oge ochie n'ihe odide ala ala peeji. Ọdịiche nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ Grik ma bụrụ nke ekepụtara ya na ụzọ abụọ: Otu “Alexandria” na -anọchite anya ihe odide kacha ochie, na otu “Byzantine” na -anọchite anya imirikiti ihe odide. A na -ama akara n'ọgụgụ ejighị n'aka na brackets. N'okpuru ibe ọ bụla, e nwere otu ụdị ngwa ederede nke na -egosipụta nhọrọ ederede nke nsụgharị Bekee 20 maka amaokwu ọ bụla nke Agba Ọhụrụ. Nke a bụ akụrụngwa ederede kacha ukwuu maka nsụgharị Bible dị mgbe ebipụtara ya. COM na -enyekwa ọgụgụ dị elu ma e jiri ya tụnyere ntụgharị ESV na NASB n'okpuru. A na -atụgharị COM na echiche mmụta okpukpe Atọ n'Ime Otu.
Crossway (2001, 2007, 2011, na 2016)
Banyere weebụsaịtị ESV: https://www.esv.org/translation
Bible ESV dị n'ịntanetị: https://www.esv.org/Luke+1
Mbipụta Mbipụta ESV: https://www.crossway.org/bibles
ESV (2001) sitere na ntụgharị asụsụ Bekee mere eme malitere na Tyndale (1526) wee gaa n'ihu na KJV (1611), ASV (1901) na RSV (1952, 1971). 1971 RSV bụ ebe mmalite maka ntụgharị ESV. ESV bụ ntụgharị "n'ụzọ nkịtị", na-emesi ike ya na mmekorita "okwu-maka-okwu" na-emegide ụfọdụ nsụgharị Bible sochiri "echiche-maka echiche" na-emesi ike "nha nha anya" kama ịbụ "n'ụzọ bụ isi" nkịtị "pụtara nke mbụ. Nke a dị mma karịa ntụgharị “echebara echiche” dịka “okwu maka okwu” na-enwekarị mmasị igosipụta echiche ntụgharị okwu nke onye ntụgharị okwu. ESV na -ebute ajọ mbunobi na ntụgharị asụsụ nke kwekọrọ na otu ndị “na -ekerịta otu nkwekọrịta… na ụkpụrụ Ndị Kraịst.” Na mgbakwunye, a na -ewere nnwere onwe nchịkọta akụkọ n'ịsụgharị okwu na -emegharị ugboro ugboro n'asụsụ Grik kwekọrọ na "na," mana, "na" maka "yana mgbakwunye nke isi okwu nkọwa. Echiche ndị kacha pụta ìhè bụ maka ozizi Atọ n'Ime Otu, nke a na -agbakwa akaebe site na nraranye nke na -agụ, "Ya mere, anyị na -enye Chineke anyị dị atọ atọ na ndị ya ihe anyị mere."
Agba ochie ESV dabere na ederede Masoretic nke Akwụkwọ Nsọ Hibru dị ka a hụrụ na Biblia Hebraica Stuttgartensia (5th ed., 1997), na Agba Ọhụrụ na ederede Grik na mbipụta 2014 nke Agba Ọhụụ (Agbazi 5th ed.), Nke United Bible Societies (UBS) bipụtara, na Akwụkwọ Novum Testamentum Graece (28th ed., 2012), nke Nestle na Aland dere. N'ọnọdụ ụfọdụ, ESV na -eso ederede Grik dị iche na ederede dị oke mkpa (UBS5/NA28) wee si otú a belata n'ụzọ ziri ezi na ederede dị oke mkpa ma e jiri ya tụnyere COM. ESV na -enye ezigbo nguzozi n'etiti pụtara nkịtị na ịgụ ihe. ESV dị ntakịrị karịa NASB mana ọ nwere ọmarịcha ọgụgụ ọgụgụ ka mma.
Akwụkwọ Nsọ Ọhụrụ nke America (NASB)
Ntọala Lockman (1971, 1977, 1995, & 2020)
Nkwupụta nke onye mbipụta akwụkwọ bụ na NASB anaghị anwa ịkọwa Akwụkwọ Nsọ site na ntụgharị yana NASB na -agbaso ụkpụrụ nke ntụgharị nha anya. Ha gbadoro ụkwụ na “ụzọ ntụgharị na-achọsi ike na nke siri ike” na-agba mbọ maka ntụgharị okwu n'otu mkpụrụokwu nke ziri ezi ma doo anya. Usoro a na -esochikarị okwu na usoro ahịrịokwu nke ndị dere Akwụkwọ Nsọ iji mee ka onye na -agụ ya nwee ike ịmụ Akwụkwọ Nsọ n'ụdị ya nkịtị. N'ọnọdụ ụfọdụ, a na -eme mgbanwe na isi ederede na ntụzịaka nke Bekee ka ọ dị ugbu a yana ntinye nkọwa ka egosipụtara na nkọwa ala ala. Ọ bụ ezie na ntụgharị asụsụ a na -agụ nke ọma, akara maka ịgụpụta ya adịghị ka nke COM ma ọ bụ ESV. na ịgụ ya na -abụkarị osisi. Ọ bụ ezie na NASB bụ ntụgharị asụsụ nke ukwuu, a na -eji ntụgharị ọdịbendị nke Atọ n'Ime Otu sụgharịa ya ma tinye isi okwu oke yana isi okwu na -atụ aro nke na -akpasu onye na -agụ ya iwe.
Thomas Nelson & Ụmụ, 1901
Njikọ Amazon: https://amzn.to/30Qg25o
ASV, nke ebipụtara na 1901 dị ka “Ndozigharị America,” gbanyere mkpọrọgwụ na ọrụ bidoro na 1870 iji degharịa King James Version (KJV) nke 1611. ASV, ngwaahịa sitere na agụmakwụkwọ Britain na America, ejirila nkwanye ugwu dị ukwuu maka ohere agụmakwụkwọ na izi ezi ya. Ederede ASV na -egosi ihe ụfọdụ ndị chere na ọ bụ oke ọgụgụ isi na, n'otu aka ahụ, ọ na -adịchaghị agụ. ASV na -eji ọtụtụ okwu amaghị na ntị nke oge a ma tinye usoro ahịrịokwu siri ike. ASV bụ otu n'ime ntụgharị asụsụ Bekee kacha ochie nke nwere oke ziri ezi ma e jiri ya tụnyere ederede Greek dị mkpa dabere na nkatọ ederede nke oge a. ASV meziri amaokwu ụfọdụ na KJV na ebe ndị ọzọ ọ wepụrụ amaokwu ndị a na -enyo enyo na isi ederede nke agụnyere na KJV. A tụbara ụdị ndị a ka ọ bụrụ nkọwa ala ala. Ọ bụ ezie na ASV nwere nnọchite anya ndị otu n'otu na kọmitii ntụgharị okwu, ọ na -egosipụta ajọ mbilite n'ọnwụ nke Atọ n'Ime Otu ebe ọ bụ na e mere mkpebi ntụgharị dabere na ọtụtụ kọmitii. Ndịàmà Jehova ejirila ASV mee ihe ruo ọtụtụ afọ ka ọ na -eji “Jehova” eme ihe dị ka aha Chineke. ASV abụrụla ntọala nke nsụgharị Bekee isii sochirinụ gụnyere Revised Standard Version (RSV), nke mbụ bipụtara na 1952 wee emelite ya na 1971, yana Revised English Version (REV) 2013-2021 nke ndị Unitarians Bible na-eji.
Ọhụrụ Revised Standard Version (NRSV), 1989
Nsụgharị Bekee Ọhụrụ (NET), 2006 & 2019
Holman Christian Standard Bible (HCSB), 1999- 2003, na 2009
Ụdị Bekee edegharịrị (REV), 2013-2021
Ọtụtụ amaokwu dị na King James Version nke Agba Ọhụrụ adịghị na nsụgharị Bible ọgbara ọhụrụ. Ndị ọkà mmụta n'ozuzu na -ewere amaokwu ndị a hapụrụ ugbu a dị ka amaokwu agbakwunyere n'ihe odide Grik. Ihe nrịba ama maka mkpebi nchịkọta akụkọ maka iwepu amaokwu ndị a dabere ma ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ gosiri na amaokwu a nwere ike ịbụ na ederede Agba Ọhụrụ mbụ ka ọ bụ mgbakwunye ọzọ. Nke a kwekọrọ n'ụkpụrụ nrụzi dị oke mkpa, dịka ihe Rev. Samuel T. Bloomfield dere na 1832 siri kwuo, "N'ezie, ọ nweghị ihe ọ bụla na -enyo enyo kwesịrị ka a nabata n'ime 'okwu e ji n'aka' nke 'Akwụkwọ nke Ndụ'. KJV nwere amaokwu 26 na amaokwu ndị ewepụrụ ma ọ bụ igbe n'ime ntụgharị ọgbara ọhụrụ nke nwere ike ọ gaghị abụ nke mbụ. Amaokwu ndị a gụnyere Matiu 17:21, 18:11, 20:16 (b), 23:14, Mak 6:11 (b), 7:16, 9:44, 9:46, 11,26, 15:28 , 15:28, 16: 9-20, Luk 4: 8 (b), 9: 55-56 17:36, 23:17, John 5: 3-4, John 7: 53-8: 11, Ọrụ 8 : 37, 9: 5-6, 13:42, 15:34, 23: 9 (b), 24: 6-8, 28:29, Rom 16:24, na Comma Johanneum nke 1 Jọn 5: 7- 8. N'ihe gbasara ngwụcha ngwụcha nke Mark (16: 9-20), enwere ezigbo ihe mere a ga-eji nwee obi abụọ na okwu ndị ahụ bụ akụkụ nke ederede Oziọma ndị ahụ, dị ka Philip Shaff kwuru, "Dịka mkpebi ndị nkatọ kacha mma si dị, ngalaba abụọ a dị mkpa bụ ihe mgbakwunye n'ihe odide mbụ sitere n'ọdịnala ndị ozi. ” KJV na -egosikwa nrụrụ aka nke Ọtọdọks nke agbanwere amaokwu na -akwado nkwado echiche nke Atọ n'Ime Otu. Ọmụmaatụ iri na abụọ nke nrụrụ aka nke sitere na mmụọ na KJV gụnyere Matiu 24:36, Mak 1: 1, Jọn 6:69, Ọrụ 7:59, Ọrụ 20:28, Ndị Kọlọsi 2: 2, 1 Timoti 3:16, Ndị Hibru 2:16 , Jud 1:25, 1 Jọn 5: 7-8, Mkpughe 1: 8, na Mkpughe 1: 10-11.
Isi okwu Greek Agba Ọhụrụ nke ejiri mepụta KJV dabere na ihe odide nke ụdị ederede Byzantine mbubreyo. Site na njirimara ikpeazụ nke ihe odide mbụ, ọtụtụ ndị ọkà mmụta ederede ọgbara ọhụrụ na -eji ihe akaebe nke ihe odide nke ezinụlọ Alexandria dị ka ndị akaebe ka mma na ederede mbụ nke ndị dere Akwụkwọ Nsọ, na -enyeghị ya nhọrọ akpaghị aka. Ederede Greek na narị afọ nke 16 Ngwa Novum Instrumentum Desiderius Erasmus, nke e mechara mara dị ka Textus Receptus, chịkọtara King James Version. Erasmus bụ onye ụkọchukwu Katọlik, onye nọgidere na -eso na Chọọchị Katọlik n'oge ndụ ya niile. Ọ masịrị ya na aha otutu "Onye isi ndị mmadụ." Mbipụta ya nke atọ nke 1522 sitere na ihe na -erughi iri na abụọ nke ihe odide Grik malitere na narị afọ nke 12 ruo 16 mana ọ bụ isi mmalite nke ntụgharị KJV. Ihe odide ikpeazụ nke Textus Receptus gosipụtara mmetụta mkpokọta nke mgbanwe ndị odeakwụkwọ n'ime opekata mpe otu puku afọ ma na -adịgasị iche na ihe odide ochie ndị edere n'ime narị afọ ise mbụ mgbe Kraịst nwụsịrị.
Revised Igbo Version (Mkpu)
Mmụọ Mmụọ na Eziokwu International, 2013-2021
Bible REV dị n'ịntanetị nwere nkọwa: https://www.revisedenglishversion.com/Luke/1
REV malitere na American Standard Version (ASV) nke 1901 dị ka ederede mmalite. Ezubere REV ka ọ bụrụ ntụgharị ntụgharị karịa ka ọ bụla mgbe enwere ike igosipụta ma ghọta n'ụzọ ziri ezi n'asụsụ Bekee nke oge a. REV na -apụ mgbe ụfọdụ site na ntụgharị asụsụ nkịtị iji meziwanye ọgụgụ na nghọta na Bekee. Nsụgharị n'ụzọ nkịtị nwere ike isi ike karịa inye aka mgbe ụfọdụ n'ihi na sistemụ nke Grik na Hibru dị nnọọ iche na Bekee. Ụzọ ha si eme ya bụ iji otu okwu na -arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ntụgharị asụsụ nkịtị na -egbochi ebumnuche a iji kwupụta ihe asụsụ mbụ pụtara. Ngụgharị nke REV dị ka ESV na RSV.
Ihe mgbaru ọsọ nke ndị ntụgharị okwu bụ izi ezi nke nkà mmụta okpukpe na mgbakwunye na izi ezi nke ederede. Ha na -amata na nkà mmụta okpukpe nke onye ntụgharị okwu na -emetụta mgbe niile ụzọ esi sụgharịa Grik ma ọ bụ Hibru n'asụsụ Bekee, ogo a sụgharịrị Akwụkwọ Nsọ "dabere na ogo onye ntụgharị okwu ghọtara nke ọma ihe Bible pụtara," na " ntụgharị ọ bụla na -egosipụta nkà mmụta okpukpe nke onye ntụgharị okwu. ” Ha kwenyere na ndị na -agụ Akwụkwọ Nsọ "ga -aka nke ọma site n'ịgụ nsụgharị nke bụ nkà mmụta okpukpe ziri ezi kama ime mgbazi echiche ma ọ bụ uwe mwụda n'akụkụ amaokwu ndị a na -atụgharị n'uche nke nwere nkà mmụta okpukpe ọzọ." Ebumnobi ya na REV bụ iji mebie onye na -agụ ya ịnagide echiche na -ezighi ezi nke nkà mmụta okpukpe nke ọtụtụ ndị ntụgharị okwu. REV bụ ntụgharị sitere na echiche nke ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ ma na -anwa ịpụ na enweghị echiche ọdịnala Atọ n'Ime Otu. Ụdị ịntanetị nke REV gụnyekwara nkọwa nke enyere mgbe ịpị amaokwu.
Otu Chineke ahụ, Nna ahụ, Otu Mmadụ NT Translation (OGF)
Mweghachi Mweghachi, 2015 & 2020
Njikọ Ịntanetị: https://onegodtranslation.com/
Njikọ Amazon: https://amzn.to/3vEUpn0
Nsụgharị Agba Ọhụrụ nke OGF nke Sir Anthony Buzzard abụghị ntụgharị okwu "okwu maka okwu" kama ọ bụ ntụgharị nkọwa nke ukwuu site n'echiche nke otu Akwụkwọ Nsọ, dịka e hotara na mbido, "Anyị na -enye nsụgharị nke agba ọhụrụ a iji wee weghachite eziokwu ahụ bụ na Chineke bụ otu onye, ​​na Jizọs bụ Mesaịa, Ọkpara Chineke site na ọrụ ebube nakwa na Oziọma na -azọpụta bụ gbasara alaeze Chineke, dịka Jizọs kwusara ya, na banyere ihe niile Jizọs kwuru ma mee ka ọ kuzie ụzọ nke na -eduba na ndụ ebighi ebi na alaeze Chineke nke ga -abịa n'ọdịnihu. ” Uru pụrụiche nke ntụgharị asụsụ a dị na nyocha okirikiri nke enyere na mmeghe na nkọwa ala ala sara mbara. E mere ya iji dozie nghọtahie juru ebe niile nke ọdịnala na-emebeghị nyocha n'akwụkwọ nsọ kpatara.
Ederede Hibru nke bụrụ ntọala maka ọtụtụ ntụgharị nke Agba Ochie gaa na Bekee bụ a Onye Masoret Ndozigharị dabere kpamkpam na Leningrad Codex, nke malitere na 1008 AD E jiri ya tụnyere ihe akaebe ederede anyị nwere maka ederede Greek Agba Ọhụrụ, nke a bụ akwụkwọ akachasị. Nke a dị mma mgbe asụsụ Grik gasịrị Septuagint tụgharịrị (narị afọ nke atọ tutu amụọ Kraịst), Aramaic Peshitta (1st na 2nd narị afọ AD), ma ọ bụ Latin Vulgate (Narị afọ nke anọ AD). Dịka ọdịnala ndị Kristian siri dị, ndị Juu na-abụghị Ndị Kraịst malitere ime mgbanwe na ederede Agba Ochie iji belata ojiji nke Ndị Kraịst nke amụma Agba Ochie gbasara ọbịbịa Kraịst.
The Septuagint, ụdị Grik nke ihe odide Agba Ochie ndị e jiri n'oge Agba Ọhụrụ na na ụka mbụ, kwesịrị ntụkwasị obi karịa nke Onye Masoret Nnwale Hibru nke ọtụtụ ntụgharị asụsụ Bekee dabere na. Nke a bụ maka ihe ndị a:
Amaokwu nke Agba Ochie na nke dị n'Agba Ọhụrụ na -ejikarị ederede Septuagint.
Septuagint dabeere n'ihe odide Hibru opekata mpe narị afọ iri na abụọ karịa ederede nke mbipụta Masorete dabeere.
Septuagint bu ụzọ pụta ihe odide Masorete n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị afọ iri.
Kemgbe achọtara Akwụkwọ Mpịakọta Osimiri Nwụrụ Anwụ, anyị makwaara na Septuagint sitere n'ihe odide Hibru ochie karịa ederede Masorete.
Metropolitan Hilarion (Alfeyev) kwuru n'ime Ozizi na nkuzi nke Ụka Ọtọdọks:
… Ndabere nke ederede agba ochie na ọdịnala Ọtọdọks bụ Septuagint, ntụgharị Grik nke “ndị ntụgharị okwu iri asaa” mere na narị afọ nke atọ ruo nke abụọ TOA maka ndị Hibru Aleksandria na ndị Juu ndị mba ọzọ. Ikike nke Septuagint dabeere n'ihe atọ. Nke mbu, n’agbanyeghi na ederede Grik abụghị asụsụ mbụ nke akwụkwọ agba ochie, Septuagint na -egosipụta ọnọdụ nke ederede mbụ dịka a ga -ahụ ya na narị afọ nke atọ ruo nke abụọ TOA, ebe ederede Hibru ugbu a E degharịrị Bible, nke a na -akpọ "Masorete," ruo narị afọ nke asatọ OA. Nke abụọ, ụfọdụ amaokwu ndị e si n'Agba Ochie wee hụ n'ime New na -ejikarị ederede Septuagint. Nke atọ, ma ndị nna Greek nke Chọọchị, na ọrụ akwụkwọ nsọ Ọtọdọks jiri Septuagint (na okwu ndị ọzọ, ederede a ghọrọ akụkụ nke Ọdịbendị ụka Ọtọdọks). N'iburu n'uche ihe atọ edepụtara n'elu, St. Philaret nke Moscow na -eche na ọ ga -ekwe omume idobe na “na nkuzi Ọtọdọks nke Akwụkwọ Nsọ, ọ dị mkpa ịtụkwasị nkwenkwe nkwenkwe na ntụgharị…. mbụ na ọbụna bulie ya elu karịa ederede Hibru, dị ka a na -anabatakarị na mbipụta kachasị ọhụrụ (Ọtọdọks Ọtọdọks, Mpịakọta nke Abụọ: Ozizi na Nkuzi nke Ụka Ọtọdọks, (New York: St. Vladimir Seminary Press, 2012) p. 34) .
Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Septuagint (NETS)
Mahadum Oxford University (2007)
Njikọ Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/New_English_Translation_of_the_Septuagint
Njikọ Amazon: https://amzn.to/312ZrM0
New English Translation nke Septuagint (NETS) bụ ntụgharị Septuagint (LXX) ọgbara ọhụrụ, nke ahụ bụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke Ndị Kraịst na-asụ Grik na ndị Juu oge ochie jiri. Ndị ntụgharị NETS họpụtara mbipụta kachasị mma nke Septuagint, ọkachasị Göttingen Septuagint buru ibu ma jiri New Revised Standard Version (NRSV) dị ka ederede isi. Ndị ntụgharị NETS chọrọ ijigide NRSV ruo na ederede Grik na-eduzi ma ọ bụ na-enye ikike ebe ha na-ewepụkwa asụsụ metụtara nwoke na nwanyị nke na-adịghị akwado site na ederede isi mmalite. Enwere olile anya na mmekọrịta dị n'etiti NETS na NRSV ga -egosipụta mmekọrịta dị n'etiti LXX na ederede Hibru dị n'okpuru ya, na -eme ka ọ dịrị ndị na -agụ ya mfe ịmụ ọdịiche dị n'etiti ọdịnala ederede abụọ ahụ na -enweghị nnukwu ọmụmụ asụsụ mbụ.
Lexham Septuagint Bekee (LES)
Njikọ nkwusa: https://lexhampress.com/product/188040/the-lexham-english-septuagint-2nd-ed
Njikọ Amazon: https://amzn.to/3vNWT2r
The Lexham Septuagint Bekee (LES) bụ ntụgharị ọhụrụ nke Septuagint nke mara mma n'ụdị n'ụdị ntụsara ahụ. LES na -enye mbipụta Bekee nkịtị, nke a na -agụ agụ, na nke nwere nghọta maka ndị na -agụ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ. Na -ejigide ụdị aha na ebe ndị ama ama, LES na -enye ndị na -agụ ya ike ịgụ ya n'akụkụ Bible Bekee ha nwere mmasị. LES na -ejigide ihe ederede mbụ (mbipụta Swete), na -eme ka ndị na -agụ ya nweta Septuagint taa.
Akwụkwọ Nsọ sitere na ihe odide ọwụwa anyanwụ oge ochie nke Aramaic Peshitta (Bible Lamsa)
Harper Otu (1933 & 1985)
Njikọ Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lamsa_Bible
Njikọ Amazon: https://amzn.to/3tAfEnM
Bible Lamsa dị n'ịntanetị: https://www.studylight.org/bible/eng/glt
George M. Lamsa bipụtara Akwụkwọ Nsọ Nsọ site na Ancient Eastern Manuscripts (Lamsa Bible) na 1933. O sitere na Syriac Peshitta, Akwụkwọ Nsọ nke Asiria Ụka ​​nke Ọwụwa Anyanwụ na omenala Ndị Kraịst ndị ọzọ nke Syriac. Lamsa, n'ịgbaso omenala ụka ya, kwuru na e dere Agba Ọhụrụ nke Aramaic tupu nke Grik. Nke a dị iche na nkwekọrịta agụmakwụkwọ na asụsụ Agba Ọhụrụ bụ Grik. Ọ bụ ezie na ndị obodo agụmakwụkwọ jụrụ Lamsa na ọ bụ ọkwa Aramaic, ntụgharị ya ka bụ ihe kacha mara amara n'asụsụ Aramaic na ntụgharị nke Agba Ọhụrụ na ọ bụ ntụnye bara uru maka atụnyere ọdịnala Aramaic na ntụgharị sitere na anwansi ndị ọzọ. Bible Lamsa bara uru nke ukwuu dịka onye akaebe nke tradation agba ochie nke Aramaic. Agba ochie Lamsa dabere na ya Codex Ambrosianus nke amatala na narị afọ nke ise AD wee buru ihe odide OT ọ bụla dị n'asụsụ Hibru (Leningrad Codex) ihe dị ka afọ 500.
Ọ bụ ezie na eserese dị n'okpuru ebe a bụ njiri mara mma karịa ọnụ ọgụgụ, ọ na -enye echiche zuru oke banyere otu esi eme ka “izi ezi” nke ịghọta ihe amaokwu pụtara site na itinye ngwa ọmụmụ Bible maka ịtụle ederede nke ihe odide mbụ na ịmụ. ihe okwu pụtara maka iji ha eme ihe n'asụsụ mbụ. Nke a na -enyekwa onyonyo onyonyo nke ihe nkịtị karịa nke nkịtị.
Iji nsụgharị dị iche iche nke Bible atụnyere bụ ngwá ọrụ bụ́ isi e ji amụ Bible. Ntụgharị asụsụ eji kwesịrị inwe ọkwa ziri ezi anakwere (ndị si n'etiti ahịrị ruo n'aka ekpe na eserese dị n'elu). Ndị a gụnyere ESV, NAS/NASB/NASU, ASV, NRSV, na RSV. Geneva Bible (GNV) bụkwa ezigbo ntụaka maka ọdịnala ederede tupu KJV. A ga-atụnyere REV (Revised English Version) na nkọwa ya na ntụgharị asụsụ ndị a nwere echiche okpukpe ọdịnala nke a ga-enweta na webụsaịtị REV.
Ngwa dị oke egwu na nkatọ ederede nke isi ihe bụ usoro ahaziri ahazi iji nọchite anya, n'otu ederede, akụkọ mgbagwoju anya na ọgụgụ dị iche iche nke ederede ahụ n'ụdị dị nkenke bara uru nye ndị na-agụ akwụkwọ na ndị ọkà mmụta dị uchu. Ngwa a na-agụnyekarị ndetu ala ala peeji, ndebiri ahaziri ahazi maka ihe odide isi mmalite, yana akara maka igosipụta nsogbu ndị na-emegharị ugboro ugboro (otu akara maka ụdị njehie nke ọ bụla). Nhọrọ ngwanrọ dị elu dị na ngalaba dị n'okpuru na-enye njikọta na ederede na ngwa dị oke mkpa. Ịnweta ngwa dị mkpa dị mkpa (NA-28 na UBS-5) adịghị n'efu. Nke a bụ njikọ di na nwunye na ngwa ndị ọzọ efu dị n'ịntanetị.
Akwụkwọ ozi Blue: https://www.blueletterbible.org/
Akwụkwọ ozi Blue: https://www.blueletterbible.org/products.cfm